Naato Indray Ny Asan’ny Orinasa Mpamokatra Herinaratra Mandeha Amin’ny Rano, Belo Monte Ao Brezila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Oktobra 2017 5:24 GMT
Jery amin'ny toeram-pamindra-toerana an-tanandehibe (RUC) Jatobá, ao Altamira, Brezila. Sary: Aaron Vincent Elkaim/ISA, published with permission.
Ity lahatsoratra avy amin'i Isabel Harari ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny tranonkalan'ny Instituto Socioambiental (ISA) izay manana fiarahamiasa fifampizarana votoaty amin'ny Global Voices.
Roa taona lasa izay, nomena fahazoan-dalana hiasa ny Tohodranon'i Belo Monte ao amin'ny fanjakana avaratr'i Parà any Brezila ary ao anatin'ny dingana farany amin'ny fananganana. Na izany aza, mbola miatrika fiampangàna fa manitsakitsaka ny zo ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana ity orinasa mpamokatra herinaratra amin'ny alalan'ny rano ity.
Tamin'ny Alarobia 13 septambra, naaton'ny fitsarana ara-paritra ao Brezila ny Fahazoan-dalany Hanangana (LI) noho ny fepetra ratsy amin'ny trano fonenana ao amin'ny toera-ponenana namboarina ho an'ireo fianakaviana an-jatony nafindra toerana avy ao Belo Monte.
Nanomboka tamin'ny taona 2012 ny tsikera momba ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny trano fonenana raha nampanantena trano biriky manana habe telo samihafa, arakaraky ny haben'ny fianakaviana voakasika ny Norte Energia, orinasa mpamita ny asa ao Belo Monte. Na izany aza, niorim-ponenana tao tamin'ireo trano mitovy habe avokoa ihany ny fianakaviana rehetra . Ny halaviran-dalana eo amin'ny trano fonenana vaovao sy ny toeram-piasana sy ny sekoly, miaraka amin'ny fepetra ratsy tahaka ny lavaka sy ny triatra amin'ny rindrina no zava-misy isan'andro tsikerain'ireo sampan-draharaham-panjakana tsy tapaka.
Nampihitsoka ny asa rehetra mifandraika amin'ny fananganana ny orinasa famokarana herinaratra, izay nokendrena fa hanomboka hiasa tanteraka amin'ny taona 2019 ny fampiatoana. Mandà tsy hankatoa ny fahefam-pitsarana nandray ny fanapahan-kevitra ny Norte Energia ary nilaza tamin'ny fanambarana fa “tsy manan-kery ny fanapahan-kevitra tahaka izany satria momba ny Fahazoan-dalana Hanangana. “
Tamin'ny Zoma 22 Septambra, nanome alalana ny fampiasana ny mpitandro ny filaminana io fitsarana ara-paritra io raha toa ka tsy manaja ny fanapahan-kevitra sy manohy ny asa fananganana ny Norte Energia.
Mpikatroka momba ny tontolo iainana Helena Palmquist, monina ao amin'ny fanjakana Pará, naneho hevitra tamin'ny andian-tsioka momba ny fifandirana manodidina ny fanapahan-kevitra:
Nilaza foana ny Norte Energia sy ny governemanta Breziliana fa hamonjy ireo mpihinana kankana ao Xingu [renirano nananganana ny Belo Monte] ny Belo Monte.
Nieboebo hatrany izy ireo fa honina amin'ny trano tsara indrindra, ahitana fidiovana tsara indrindra ao amin'ny firenena ny olona.
Tsy nisy nitranga ny iray tamin'izany ary miezaka miaro-tena ao amin'ny fitsarana mihitsy ny orinasa, milaza fa tsy nampoizina ny hamandoan'i Amazônina
Ary ankehitriny, noho ny orinasa mpamokatra herinaratra efa ho vita, tsy maintsy manaiky ny fahasimban'ny fiainan'izy ireo toy ny zava-misy efa tontosa ny mponina
Zavatra bitika indrindra ny fanatsaharana ny Belo Monte. Tena bitika.
Misesisesy ny fampiantoana
Nanana fahazoan-dàlana hiasa hatramin'ny Novambra 2015 ny Norte Energia, izay nanova tanteraka ny fepetran'ny fahazoan-dalana hanangana. Ahitana fepetra vaovao izay tsy notanterahana izany fahazoan-dàlana izany ary noho izany manamafy ny tsy fanarahan-dàlana momba ny tontolo iainana ataon'ny orinasa. Miatrika fanapahan-kevitra ara-pitsarana efatra hafa ny orinasa izay mety handidy ny fampiatoana ny fahazoan-dàlany hiasa ihany koa.
Tamin'ny volana aprily 2017, nampiato ny asan'ny orinasa ny fitsarana ara-paritra raha tsy hatsaraina ny rafitra mpamoaka rano maloto ao Altamira, izay mbola tsy natao. Ity fanapahan-kevitra manan-tantara ity no voalohany nahitana fitsarana ara-paritra nanafoana ny fampiatoana fepetra fiarovana, izay efa namela ny orinasa nanohy niasa tany am-boalohany tsy nisy fanarahamaso momba ireo fepetra tokony narahany.
Na dia naato aza ny fahazoan-dalana hiasa ary manan-kery ara-dalàna ny fampiatoana ny fahazoan-dalana hanangana, tsy nisy nohajaina ireo fanapahan-kevitra ireo. Heverina fa hifarana amin'ny taona 2019 miaraka amin'ny fametrahana maotera ahodin-drano (torbinina) farany ny fiafaran'ny fananganana.
Manohy mamokatra sy mivarotra angovo ny Norte Energia, mihaika ny fanapahan-kevitra ara-pitsarana rehetra.